Neetwoorkii basaasaa sodaachisaa al-Shabaab Somaaliyaa keessatti - BBC News Afaan Oromoo
Neetwoorkii basaasaa sodaachisaa al-Shabaab Somaaliyaa keessatti
Duulli Dhaabbata Biyyoota Gamtoomaniin deggeramu waggoota 12 isaaniratti taasifamullee Milishaan Isilaamistootaa Somaaliyaa osoo humni isaanii hin laafiin itti fufanii jiru. Kanaaf ammoo kan isaan gargaaru marsariitii kanaaf mijaawaa ittiin basaasan ta'uu barreesseera Mary Harper BBC irraa.
Yeroo hedduu, yeroon UK irraa gara Somaliyaatti deebiyu, bilbilli al-Shabaab irraa naaf bilbilama. Yeroo hedduu osoon maatii koo waliin hin dubbatiin naaf bilbilama, yeroo gara manaatti galutti shaanxaa koo eeggachaa ykn taaksii qabadhee gara manaatti deemaa wayitan jiru na mudata.
Yeroo tokko, ergan gara magaalaa kibba Somaaliyaatti argamtu Baayidaawaa jedhamtu deemee deebiyee, ibsa tokkoo tokkoo maal akka hojjedheefi eessa akkan ture natti himame.
Haleellaa Naayiroobiin namootni ajjeefaman 21 gahan
Al-shabaab Somaaliyaa keessaa eenyu?
"Baankii deemtee turte garuu cufaa ture. Karra isaa rurukkuttee akka siif banamuuf yaaltee turte. Suura ta'es fudhatteetta," jedhan namni al-Shabaab dhaaba hidhannoo al-Qaeda nqaba jedhamerraa tokko.
"Eegdonni dhuunfaa kee tasuma ogummaa hin qaban. Siin eeguu dhiisanii asiifi achi jedhu, qawwee isaanii akkuma rarraafataniin walii waliisaaniin haasa'u."
Goodayyaa suuraa Moqaadishoon waggoota sodomaaf rakkoo kana keessumsiifte
Akkamitti akka kana hunda baruu danda'an, akkamitti ammoo akkas dogoggora malee ta'an jedhee yeroon miseensota al-Shabaab gaafadhutti, namni ani dubbisa isaan eessaayyu hiriyyoota qabu jedhee natti hime.
Ani karoora imala kootii natti dhiyaatanii hunda beeku jedhee sodaadhus, ana caalaa xiyyeeffannaa cimaa biroo waan qabaniif akkan sodaachuu hin qabne natti himan. Haata'u malee, "Yeroo hin taane bakka hin taanetti argamee" akkan rakkoo keessa galuu hin qabne dubbatan.
'Isaan eessayyu jiru'
Ani namoonni sochii koo Somaaliyaa keessatti na hordofan miseensota garee milishaa damee basaasummaan gara jabeeyyii ta'an, Amniyat jedhamanidha. Warri kaan ammoo namoota warruma "akkuma ergaman" irratti hundaa'uun kaffalamuuf ta'ee odeeffannoo dabarsaniif kaffaltaa xiqqaa argatu.
Wanti hunda caalaa na sodaachise ammoo akkaataa milishoonni kunneen namoota qacarachuu barbaadan hordofan, sodaachisan ykn ajjeesanidha.
"Al-Shabab akka hafuuraati. Bakka hundumaa jiru," jedha dargeessi tokko. Dargageessi akkas jedhu kun milishoonni kunneen maaliif firiijiifi meeshaa qilleensa qabbaneessitu miseensota Dhaabbata Biyyoota Gamtoomanii mootummaa Somaaleefi Gamtaa Afrikaadhaan gedderamu [Amisom]'tti gurgurta jechuudhaan isa adabuudhaaf akka isallee barbaadaa jiran dubbata.
Namni biraan al-Shabaab keessaa ba'e tokkos waan isa mudate dubbata. Guyyaa tokko miseensi garee kanaa tokko isa waamuun bakka ta'e guyyaa ta'e yeroo deemutti uffata bifa maalii akka uffatu isa gaafatanii akka turan ibsa.
Warri kaan ammoo akkamitti akka milishoonni kunneen Moqaadishoo keessatti manaafi bakkawwan hojiitti dhufuun sodaachisan ykn qacaruudhaaf yaalan ibsa. Agayya 2011 gareen kun Moqaadishoo keessaa akka ba'an taasifamanis kun hunduu garuu ni ta'a.
Jechuun afaan Arabaan "Dargageessa"
Akka damee warra Yuniyeenii Manneen Murtii Isalaamaa (Union of Islamic Courts) kan bara 2006 keessa Moqaadishoo to'atanii turaniitti ijaarame.
Loltoonni ijoodha jedhaman lakkoofsi isaanii 5,000 hanga 6,000 ni ta'a
Miseensonni neetiwoorkii basaasaa keessa jiran ammoo lakkoofsi isaanii 500 hanga 1,000 ni ta'a
Maddi galiin guddaan gibira sassabuufi maallqa eegumsaa
Somaaliyaa Kibbaa baadiyyaa caalmaan to'atanii jiru
" Amniyat seelii dhaaba kanaati. Humna qabeessadha. Yoo Amniyat dhabamsiifame, al-Shabab hin jiraatu," jedha Husseen Sheikh Alii, namni gorsaa nageenyaa pirezedaantii Somaalee duraaniifi daarekterri Dhaabbata Hiraal jedhamu Moqaadishootti argamu.
Warri Amniyat neetwoorkii isaanii bakka gara garaatti diriirfataniihojjetu. Bakka naga qabeessadha jedhamullee hidda diriirfatanii qabu.
Namoonni Amniyat keessa hojjetanis warra kaan caalaa kaffalataa ni argatu.
"Bakka naannoo diinaati jedhan keessa ni jiraatu. Yeroo hedduu ammoo naannoo mootummaan jiru keessatti dabarsu," jedhan.
Akka Mubarak jedhanitti, miseensota Amniyat gargaaruu keessatti dubartoonni ga'ee guddaa taphatu.
"Dubartoonni Amniyat ni gargaaru. Isaan qaama bu'uura inni diriirfateedha. Haadhotiin warraa warra Al-Shabab alkan tokko sireefi nyaata dhiyeessuudhaan isaan deggeru, akkasumas wantota barbaachisan geejjibaan geessisuufi ergaawwan dabarsuudhaan gargaaru."
Amniyat baayyee icciitii isaa kan eeggatudha. Miseensonni isaa eenymmaa isaanii waldhoksu. Obbo Mubaarak Amniyat eenyummaan miseensota isaanii akka wal hin beekne ibsa. Miseensonni yeroo walga'an hundi isaanii fuula isaanii xatatu, walii walii isaanii gidduuttiyyu jechuudha.
"Gaggeessaa isaanii qofaatu fuula isaanii beeka," jedha.
'Akka icciitii kan 'Stalinist''
Amniyat kutaa gara garaa hedduu qaba. Inni ijoon basaasummaafi deebii basaasummaa irratti yeroo xiyyeeffatu kaan ammoo boombii dhoosuufi ajjeechaa irratti xiyyeeffata.
Namoonni warri al-Shabab keessaa ba'an Amniyat nu hordofa jedhanii sodaatu.
Warri al-Shabaab keessaa ba'anii giddu-gala danadamanna keessa jiran akka jedhanitti, yoo Somaaliyaa keessaa baqanne qofa nagummaan nutti dhaga'ama jedhu.
Goodayyaa suuraa Loltoota Somaaliyaa
"Al-Shabab bilbila koo irratti naaf bilbilan jedha namni garee kana waliin waggaa ja'aaf waraana irra turan.
Ji'oota dhiyoon asitti US haleellaa xiyyaaraa dabalaa dhuftus, al-Shabaabiin balleessuudhaaf rakkoo cimaatu is amudachaa jira. kanaaf sababiin hanga tokko, miseensonni Amniyat hedduun lafa nagaa mootummaan jiru keessa waan dhokataniif adda baasanii irratti xiyyeefachuun rakkisaadha.
Akka Richard Barrett, daarektera opereeshinii shorokkeessummaa dura dhaabbachuu idil-addunyaa Biriitish duraaniifi yeroo ammaa Somaaliyaa keessa hojjetan, Aminyat, "beektota al-Shabaaa, akka sochii bu'a qabeessa, jabaafi naamusa qabu keessaafi alatti kabaja qabudha."
"Milkaa'inni al-Shabaab naannoo mootummaan qabatee jiru keessatti argamsiifate sababii Aminyat tiif akka ta'e shakkiin hin jiru," Jedhan. "Kun poolisii icciitii Stalinist humna bal'aafi opoereeshinii cimaa qabudha."
Haleellaa Keeniyaa: haleellaa hoteela DusiitD2'n namoonni ajjeefaman 21 gahan
Okkara Somaaliyaa: Muktaar Rooboow Baayidowaa keessatti qabamuun okkara kaase
'Yaalii fonqolcha mootummaa' kan qindeessan Asaaminew Tsiggee ajjeefaman
US gaggeessaa olaanaa Iraan irraatti qoqqobbii keesse
'Ajjeechaa aangawoota malee, fonqolcha mootummaa miti'